Ambongadiny kitapo sakafo zazakely Mpanamboatra sy mpamatsy |Yingzhicai
Ny kitapo mitsangana no mahatonga ny vokatra hijoro eo amin'ny talantalana na latabatra rehefa mameno ny vokatra ao anatiny, amin'ny maha-iray amin'ireo mpamatsy paosy mijoro tsara indrindra any Shina, manana safidy feno kitapo mitsangana ho an'ny safidin'ny mpanjifantsika isika, ho iray amin'ireo tsara indrindra. Ny vokatra harona fonosana fanavaozana nivoaka tato anatin'ny taona vitsivitsy izay mamorona fanamorana be dia be amin'ny indostrian'ny fonosana. Ny kitapo sakafo zazakely dia toy ny andriamanitra ho an'ireo ray aman-dreny izay sahirana foana.
zavatra Kitapo sakafo zazakely
Fampiasana Mety amin'ny sakafo zazakely, toy ny Fruit puree, fromazy paste, sakafo fanampiny ho an'ny zazakely sy ny ankizy madinika.Mametaka katsaka na zavatra hafa
Shape: ny endrika rehetra dia azo namboarina ho an'ny mpanjifa
Fanontam-pirinty nomen'ny mpanjifa na novolavolain'ny mpamorona anay
Fanontam-pirinty Gravure, hatramin'ny loko 10
Laminate Laminate tsy misy solvent
Santionany Santionany maimaim-poana dia misy, entana aloan'ny mpanjifa, omen'ny 3-7days
Port de loading Qingdao, Sina
FANOMEZANA 50% petra-bola amin'ny TT, 50% fifandanjana amin'ny TT alohan'ny delvery
Ny kitapo mitsangana no mahatonga ny vokatra hijoro eo amin'ny talantalana na latabatra rehefa mameno ny vokatra ao anatiny, amin'ny maha-iray amin'ireo mpamatsy paosy mijoro tsara indrindra any Shina, manana safidy feno kitapo mitsangana ho an'ny safidin'ny mpanjifantsika isika, ho iray amin'ireo tsara indrindra. Ny vokatra harona fonosana fanavaozana nivoaka tato anatin'ny taona vitsivitsy izay mamorona fanamorana be dia be amin'ny indostrian'ny fonosana. Ny kitapo sakafo zazakely dia toy ny andriamanitra ho an'ireo ray aman-dreny izay sahirana foana.Ny kitapo dia misy voadio izay mety ho an'ny zazakely. Araka ny voalazan'ny dokoteran-jaza dia ilaina kokoa ny kitapo sakafo satria haingana izy ireo ary fampifangaroana tonga lafatra amin'ny fahasalamana.Izany dia satria ny kitapo sakafo dia manambatra voankazo, legioma ary sakafo proteinina miaraka amin'ny sakafo mahavelona.
Baby Food sy Yogurt Spout Pouch no fonosana sakafo tsara indrindra ho an'ny zazakely sy ny ankizy.Ny fonosana dia tsy lanja maivana sy mety, fa azo antoka ho an'ny ankizy ihany koa.
Ny pouch spout dia tsy misy BPA mba hiantohana ny fiarovana ny sakafo.Ny paosin'ny spout miaraka amin'ny fampisehoana sakana tsara dia afaka mitahiry ny sakafo ara-tsakafo.
Ny sakafo dia mora voatsindry;Ny satroka anti-kenda dia afaka manakana ny ankizy tsy hitelina ny satroka tampoka.
paosy dia nitondra ny tontolon'ny sakafon-jaza tamin'ny tafio-drivotra.Izy ireo dia mety, sterile ary tout isan-karazany tsiro sy ny sakafo fitambarana.Ny kitapo dia mora ampiasaina ary manome fahafaham-po ho an'ny ray aman-dreny, manolotra sakafo azo entina mifanaraka amin'ny fomba fiaina be atao amin'ny fianakaviana maro ankehitriny.
teo aloha: kitapo detergant
Manaraka: kitapo mitsangana